Canshuurta Faransiiska ee ajnabiga ajnabiga ah: nidaamka canshuuraha, degaanka maaliyadeed, canshuur celinta
Canshuuraha ajnabiga ee Faransiiska
Posted by Tranquillus | Juun 25, 2018 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Dhamaan dadka ku nool Faransiiska waa inay iska bixiyaan cashuurta Faransiiska, iyo wax kasta oo dhalashadoodu tahay. Dhammaan dakhligooda ka dib waxaa lagu xisaabtamayaa xisaabinta canshuuraha.
Canshuuraha: deganaanshaha canshuurta ee Faransiiska
Canshuuraha Faransiisku waxay ku saabsantahay muwaadiniinta faransiiska ah ee canshuurtu ku leedahay Faransiiska, laakiin sidoo kale muwaadiniin shisheeye ah xaalado gaar ah.
Go'aaminta canshuurta canshuurta
Marka laga eego dhinaca aragtida canshuuraha, iyo in la dhiso degaankiisa miisaaniyadda ee Faransiiska, mid waa inuu buuxiyaa shuruudaha qaarkood. Haddii mid ka mid ah shuruudahaas la dhammaystiray, qofka daneeyaa ayaa loo tixgeliyaa sida joogey Faransiiska.
Degganaanshaha caadiga ah (ama kan qoyska) ama meesha ugu muhiimsan ee deganaanshuhu waxay ku taalaa dalka Faransiiska.
Si aad u isticmaasho waxqabadyo xirfad leh, macaamiisha ama aan ahayn, Faransiiska.
Xarunta dhaqaalaha iyo shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed waa Faransiis.
Natiijo ahaan, midna ma dooranayo canshuurta canshuurta, waxay dhab ahaan ka soo baxdaa shuruudaha caadiga ah iyo sharciga. Canshuurta aan canshuurta ahayn ee Faransiiska ayaa markaa kadib laga canshuurayaa dakhligiisa oo ka yimid ilo Faransiis ah. Mushaarka uu ku soo galo waxqabadka ku saabsan ciidda Faransiiska waxaa lagu cadeeyey canshuur celinta Faransiiska.
Inta badan heshiisyada caalamiga ah ee canshuurta ayaa markaa bixiya wixii loo yaqaan ficilka ku meel gaadhka ah. Shaqaalaha ka yaryahay maalmaha 183 ee Faransiiska lagama yaabo inay canshuur ka bixiyaan dakhliga lagu kasbaday hawlahaas.
Sidee loo xisaabiyaa canshuurta Faransiiska?
Canshuurta Faransiiska waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo dakhliga kala duwan ee canshuurta guriga. Waxay ka iman karaan ilo kala duwan: mushaharka, hawlgabka, kirada, daqliga dhulka, iwm. Canshuurtu waxay u dhigantaa canshuur bixiyaha iyo xaaskiisa, laakiin sidoo kale carruurtiisa ayaa lagu dhawaaqay. Kadib, dakhliga guud ee qoyska wuxuu u qaybsan yahay tirada saamiyada.
READ Koontada tababarka shaqsiga: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Canshuur celinta, hal qaybood ee qaangaarka ah iyo qeyb ka mid ah labada qaybood ee labada ilmood ee ku-tiirsan. Ilma kasta oo ka mid ah ilmo saddexaad oo ku-tiirsan ayaa u dhigma hal qayb. Sicirka canshuurta ayaa sidaas darteed ku xiran yahay cabbirka qoyska iyo dakhliga.
Qiyaasta horumarka ee canshuurta waxaa la aasaasay inta udhaxeysa 0 iyo 45%. Faransiiska gudaheeda, canshuur bixiyeyaasha waxaa lagu canshuurayaa dakhligooda Faransiiska iyo dakhligooda shisheeyaha, iyadoon loo eegin jinsiyadooda.
Canshuurta kalsoonida ee maaliyadda
ISF waa cashuur loogu talagalay dadka dabiiciga ah ee haysta hantida ka sarreeya xadka ugu qeexan 1er January. Dadka haysta degaankooda maaliyadeed ee Faransiiska waxay bixin doonaan ISF dhammaan hantidooda ku yaal Faransiiska iyo dibadda Faransiiska (sida ku cad heshiisyada caalamiga ah). Canshuurta labanlaabka ah waa dabcan laga fogaado maqnaanshaha shir caalami ah.
Dadka aan gurigooda canshuurtu ahayn Faransiiska waxaa kaliya lagu canshuuri doonaa hantidooda ku taal carrada Faransiiska. Kuwani markaa waa hanti ma guurto ah oo jireed, hanti ma guurto ah iyo xuquuq dhab ah oo ma guurto ah. Waxa kale oo laga yaabaa inay khusayso sheegashooyinka dayn ku yaalo Faransiiska iyo sidoo kale dammaanadaha uu soo saaray qof sharci ah oo xafiiskiisu ku yaal Faransiiska, ama Dawladda Faransiiska.
Ugu dambeyntii, saamiyada iyo saamiyada shirkadaha iyo hay'adaha sharciga ah ee aan ku jirin suuqa saamiyada iyo hantidooda waxay ka kooban yihiin inta badan xuquuqda macaamiisha iyo hantida maguurtada ee Faransiiska ku yaal.
READ Ayaa ka faa'iidaysan kara joojinta shaqada ee la xiriirta xiritaanka iskuulada? Haddii aad xaq u leedahay, waa immisa iyo muddada magdhowgu?
Cashuurta dadka ku nool Faransiiska
Dadka ku nool dalka Faransiiska oo degan miisaaniyadooda ku yaala Faransiiska waa inay buuxiyaan oo ay buuxiyaan canshuur celinta Faransiiska.
Nidaamka canshuurta Faransiiska
Qof kasta oo deggen Faransiiska wuxuu markaa ku jiri doonaa xaalad la mid ah tan cashuur bixiyeyaasha Faransiiska. Dakhligooda dhammaantood waa la canshuurayaa: dakhliga ka soo gala ilaha Faransiiska iyo shisheeyaha.
Dadka deggan waa inay iska diiwaangeliyaan xafiiska cashuuraha. Natiijo ahaan, haddii ay bixiyaan canshuuraha Faransiiska, waxay sidoo kale ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka sida canshuuraha kala duwan iyo gunnooyinka loo bixiyo iyo oggolaansho si loo ogaado kharashaadka laga jari karo dakhliga guud.
Nidaamka maamulayaasha shisheeye
Waxay dhacdaa in maamulayaasha ajaanibta ahi u yimaadaan inay ka shaqeeyaan Faransiiska. Muddo shan sano ah, canshuur kama saarnayaan dakhliga ay ka helaan Faransiiska. Hawlwadeennada xirfadleyda ah ee ay khusayso tallaabadan canshuuraha ee Faransiiska waa:
Dadka ugu horreyn ku hawlan waxqabadka oo u baahan xirfado gaar ah. Inta badan, meelaha khibradda leh ee su'aashu waxay ku adkaataa inay shaqo qoraan Faransiiska.
Dadka ku maal gala caasimadda shirkadaha tan iyo 1er Janaayo 2008. Xaaladaha maaliyadeed ee qaar ayaa weli la daboolayaa.
Shaqaale ajnabi ah oo ka shaqeeya shirkad ku saleysan France.
Saraakiisha iyo shaqaalayaasha dibadda loogu yeeray si ay ujeeddo u haystaan ​​inay ku hayaan shirkad fadhisa Faransiiska.
Nidaamka canshuurta ee "caajis"
Nidaam canshuureed khaas ah ayaa khuseeysa dadka ku nool mar kale Faransiiska ka dib markii dibadda laga soo diro 1er Janaayo 2008. Qof kasta oo u guura Faransiiska wuxuu arkayaa gunooyinkooda dheeriga ah ee lala xiriirinayo ku-meelgaarka ku-meel-gaarka laga dhaafay cashuurta 30%. Heerkani wuxuu u kici karaa 50% dakhliga shisheeyaha qaarkood.
READ Qorshaha Horumarinta Xirfadaha: Tillaabooyinka Tababarka Loo-shaqeeyaha loogu talagalay Shaqaalaheeda.
Intaa waxaa dheer, hanti ka baxsan Faransiiska ayaa sidoo kale laga dhaafay canshuurta inta lagu jiro shanta sano ee ugu horreeya Faransiiska.
Wax kasta oo ay xaaladdiisu tahay, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la raadsado talada hey'adaha canshuur celinta Faransiiska. Waxay awood u yeelan doontaa inay go'aamiso xaaladda ay ku codsanayso canshuurta dibadda ee dibadda ku timid inay degto Faransiiska. Waxa kale oo suurtogal ah in lagala tashado heshiisyada canshuuraadka sida ku cad waddanka asalka u ah muwaadinka ajnabiga ah. Xaaladdan, qunsulku wuxuu bixin karaa jawaabo waxtar leh sida ku cad qodobbada mid kasta.
Qof kasta oo canshuur ku leh France waa inuu bixiyaa cashuurtiisa Faransiiska. Dhammaan waxa loo baahan yahay waa in canshuur bixiyaha (ama qoyskiisu) degaanka ugu weyn uu ku yaallo ciidda Faransiiska. Waxa kale oo laga yaabaa inuu yahay danihiisa dhaqaale ama shakhsiyeediyo sidoo kale waxqabadka xirfaddiisa. Ajnabiyaasha degan oo ka shaqeynaya Faransiisku waa inay sidaas darteed ka dhigaan canshuur celintooda Faransiiska.
Canshuuraha ajnabiga ee Faransiiska 7-Maarso, 2020Tranquillus
horeShuruudaha gelitaanka iyo habka fiisada iyo baasaboorka ee Faransiiska
socdaDiiwaangeli caruurtaada dugsi Faransiis ah
Noocyada kala geddisan ee fasaxa, goorma iyo sidee looga faa'iideysan karaa?
Sida saacadaha dheeraadka ahi u shaqeeyo